Izesekeli Zokukhanyisa Kwenziwe NgeChina - Abakhiqizi - I-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Izinsiza zokukhanyisa zeplastiki>Izinsiza Zokukhanyisa
Isiqeshana sepulasitiki se-chassis se-LED
1. Unayo imboni yakho? Yebo, singumkhiqizi eChina iminyaka engaphezu kwengu-10. Kwemboni yethu itholakala esifundazweni Guangdong. 2. Ngingavakashela kanjani imboni yakho? Ama-Pls ngomusa asazise kusenesikhathi uma uhlela ukuvakasha. Singakukhombisa indlela noma sikulande esiteshini noma esikhumulweni sezindiza.3. Ngabe unikeza amasampula wamahhala? Lokho akunankinga, singathumela isampula yamahhala ukuze isetshenziswe.
Ifenisha ipulaki lepayipi lepulasitiki
Isisekelo sokukhanyisa ngeplastiki
1. Unayo imboni yakho? Yebo, singumkhiqizi eChina iminyaka engaphezu kwengu-10. Kwemboni yethu itholakala esifundazweni Guangdong. 2. Ngingavakashela kanjani imboni yakho? Ama-Pls ngomusa asazise kusenesikhathi uma uhlela ukuvakasha. Singakukhombisa indlela noma sikulande esiteshini noma esikhumulweni sezindiza.3. Ingabe unikeza amasampula wamahhala?